Antidepressants (စိတ်ကျရောဂါကုဆေး) | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
I. Monoamine Oxidas Inhibitors ( MAOIs စိတ်ကျရောဂါကုဆေး)
ဥပမာ 1. Phenelzine
MAOIs ဆေးတွေကို တခြားစိတ်ကျရောဂါကုဆေးတွေ မတိုးတော့တဲ့ စိတ်ကျဝေဒနာသည်တွေမှာ အသုံးပြုပါတယ်။
စိတ်ရောဂါကုဆေးတွေကို ဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်း အတိအကျသောက်သုံးဖို့ လိုပြီး ရေရှည်စွဲ သောက်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။ ဖြတ်တော့မယ်ဆိုရင်လည်း ဆေးပမာဏကို ဖြည်းဖြည်းချင်းလျှော့ပြီး မျှင်းဖြတ်သွားရပါမယ်။ ဒီဆေးတွေရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေက စဉ်းစားဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်း လျှော့ကျခြင်း၊ အိပ်ငိုက်ခြင်း၊ အာရုံမစူးစိုက်နိုင်ခြင်း၊ အလုပ်ခွင်အတွင်း လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကျဆင်းလာခြင်း စတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကုသမှု ခံယူနေစဉ်အတွင်း အန္တရာယ်ရှိတဲ့စက်ယန္တရားတွေကို သတိထားပြီး ကိုင်တွယ်အသုံးပြုရပါမယ်။
MAOIs ဆေးတွေအသုံးပြုနေစဉ်အတွင်း Tyramine ပါဝင်မှုများတဲ့ အစားအသောက်တွေ အလွန်အကျွံစားသုံးခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ရပါမယ်။ Tyramine ပမာဏ အလွန်မြင့်မားလာရင် သွေးပေါင် ရုတ်တရက်တက်လာပြီး အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရနိုင်ပါတယ်။
အစားအသောက်တွေ ပုပ်သိုးနေရင်၊ ရေခဲသေတ္တာထဲ ထည့်သိမ်းရမယ့် ပစ္စည်းမျိုးတွေကို မထည့်ထားမိရင်၊ သက်တမ်း လွန်နေရင်၊ ဆားစိမ်ထားရင်၊ အချဉ်ဖောက်ထားရင်၊ မီးခိုးကျပ်တိုက်လုပ်ထားရင် Tyramine ဓာတ် ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအနေနဲ့
- ချိစ်များ၊ အထူးသဖြင့် အနံ့အရသာပြင်းသော၊ သက်တမ်းလွန်နေသော ချိစ်များ၊ ဒိန်ချဉ်၊ ဟင်းချက်ရာတွင်သုံးသော ဒိန်ချဉ်
- ကြက်အသည်း၊ အမဲအသည်း၊ ၀က်အူချောင်း၊ ကြက်အူချောင်း၊ ငါးဥဆားနယ်၊ အခြောက်ခံထားသော (သို့) ဆားစိမ်ထားသော ငါးသလောက်၊ ငါးပါးနီ၊ အသားမှထွက်သော အဆီအနှစ်များ ( အမဲဆီ၊ ၀က်ဆီ)၊ ထုထောင်းထားသော အသားများ
- ထောပတ်သီး၊ ငှက်ပျောသီး၊ သဖန်းသီး စည်သွပ်ဘူး၊ အခြောက်ခံထား သောအသီးအနှံများ၊ အမှည့်လွန် အသီးများ၊ ရက်စ်ဘယ်ရီသီး (Raspberries)၊ ပဲပိစပ်၊ ပဲပိစပ်ဆီ၊ ဘီယာတွင်ပါဝင်သော တစေး။
- အလွန်အမင်းများပြားသော ချော့ကလက်ပမာဏ
ကဖင်းဓာတ်ပါဝင်တဲ့ အစားအသောက်(ဥပမာ-ကော်ဖီ၊လက်ဖက်ရည်၊ အချို့အားဖြည့် အချိုရည်၊ ချော့ကလက်) တွေမှာ Tyramine ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် MAOIs ဆေးတွေ သောက်သုံးနေစဉ် ကာလအတွင်း ကဖင်းဓာတ်ကို ရှောင်သင့်သလား၊ လျှော့သောက်သင့်သလားဆိုတာ ဆရာဝန်နဲ့သေချာ တိုင်ပင် ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
အယ်(လ)ကိုဟောပါဝင်တဲ့ အဖျော်ယမကာ( ဥပမာ-စည်ဘီယာ၊ ၀ိုင်အပြင်းစား (Sherry)၊ အနီရောင်ဝိုင် ) တော်တော်များများမှာ Tyramine ပါနေလို့ MAOIs ဆေးတွေ သောက်နေစဉ်အတွင်း လုံးဝရှောင်ကြဉ်ထားရပါမယ်။ ဒါ့အပြင် အယ်(လ)ကိုဟောမပါဝင်တဲ့ (သို့) အယ်(လ)ကိုဟောလျှော့ထားတဲ့ ဘီယာတွေမှာလည်း Tyramine ဓာတ်ပါဝင်နေတဲ့အ တွက် ရှောင်ကြဉ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
II. Antidepressants (စိတ်ကျရောဂါကုဆေး)
ဥပမာ 1. Citalopram
Antidepressants ဆေးတွေက စိတ်ပျော်ရွှင်စေတဲ့ Serotonin ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှုကို မြင့်တက်စေခြင်းဖြင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတည်ငြိမ်မှုရအောင် ပြုလုပ်ပေးပါတယ်။
ဒီဆေးတွေကို စိတ်ကျခြင်း၊ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြခြင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်း အစရှိတဲ့ စိတ်ရောဂါဝေဒနာတွေ သက်သာပျောက်ကင်းအောင် ကုသတဲ့နေရာမှာ အသုံးပြုပါတယ်။
စိတ်ရောဂါ ကုဆေးတွေကို ဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်း အတိအကျသောက်သုံးဖို့ လိုပြီး ရေရှည်စွဲသောက်ဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။ ဖြတ်တော့မယ်ဆိုရင်လည်း ဆေးပမာဏကို ဖြည်းဖြည်းချင်းလျှော့ပြီး မျှင်းဖြတ်သွားရပါမယ်။ ဒီဆေးတွေရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေက စဉ်းစား ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်း လျှော့ကျ ခြင်း၊ အိပ်ငိုက်ခြင်း၊ အာရုံမစူးစိုက်နိုင်ခြင်း၊ အလုပ်ခွင်အတွင်း လုပ်ဆောင်နိုင် စွမ်းကျဆင်း လာခြင်း စတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကုသမှု ခံယူနေစဉ်အတွင်း အန္တရာယ်ရှိတဲ့ စက်ယန္တရားတွေကို သတိထားပြီး ကိုင်တွယ် အသုံးပြုရပါမယ်။
ဒီဆေးတွေကို အစာရှိသည်ဖြစ်စေ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေ သောက်သုံးနိုင်ပါတယ်။ Paroxetine ဆေးကို အမှုန်ဖြစ်အောင်ကြိတ်ခြေခြင်း၊ အပိုင်းလေးများဖြစ်အောင် စိတ်ခြင်း၊ ၀ါးစားခြင်းမပြုရပါဘူး။
အရက်ကို ရှောင်ကြဉ်ထားရပါမယ်။ မရှောင်ရင် ဆေးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ ပိုပြင်းထန်လာနိုင်လို့ပါပဲ။